"Isha Baydhaba": meesha ay ku fadhi diriraan dumarka Soomaalida ee Istanbul - BBC News Somali
"Isha Baydhaba": meesha ay ku fadhi diriraan dumarka Soomaalida ee Istanbul
Beerta Isha Baydhaba-halka kulmisa Soomaalida Istanbul
Waxaa halkaasi isugu yimaada oo ku kulma Soomaalida ugu badan ee ku nool xarunta ganacsiga ee dalka Turkiga, waxaana ay ula baxeen magac u gaar ah "Isha Baydhabo" oo dad badan ay ku yaqaanaan magaalada Baydhaba.
Dumarka soomaalida ayaa xilliyada habeenkii aad u fariista halkan
"Sababta Isha Baydhabo loogu bixiyay goobtan ayaa ah inay leedahay biyo burqanaya, waxaana magaca uu baxay xilliga guddoomiayaha baarlamaanka [Maxamed] Mursal uu ahaa asafiirka, dadkuna waxay u bixiyeen Ishab Baydhabo maadaama Mursal uu kasoo jeedo magaalada Baydhabo," ayuu yiri Salaad Cabdile Guure.
"Sababaha ugu waaweyn ee ay halkan u yimaadana ayaa ah xog wareysi iyo weliba fadhi-ku-diriri,"ayuu raaciyay.
"Meeshan Isha Baydhabo ayaa la dhahaa, Soomaalida ayaana ula baxday, tahriibayaasha xogta ayay ka helaan, dadk yimaadana halkan ayay ku sheekeystaan," ayay u sheegtay BBC-da.
Waa arrin naadir ah in deegaannada Soomaalida gaar ahaan xilliyada fiidka ah lagu arko dumar koox koox u fadhiya oo shekeysanaya, balse dadka ugu badan ee xilliyada habeenkii "Isha Baydhabo" isugu yimaada ayaa ah dumar Soomaali ah, kuwaas oo fadhi-ku-dirir ka sameysta beerta.
"Waxaan halkan u imid in aan ku caweeyo aniga iyo asxaabteyda oo ana ku shekeysano, wakhtina ku qaadano. Halkanna way ka duwan tahay Soomaaliya oo meesha aad rabto aadan aadi karin," ayay tiri Amiira Cabdullaahi.
"Dhaqanka wuu isbadelay oo hooyooyinka Soomaalida marka gabadha ay rabto inay baxdo way canaantaan oo waxay yirahdaan ha bixin iyo wax lamid ah balse halkan way ka duwan tahay," ayay Amiira raacisay.